February 2016 - BuzzFeed Myanmar
ရေရှည်ခိုင်မြဲတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ဒီအချက် (၂) ချက်မှာ အထူးကောင်းမွန်သူများဖြစ်
ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပြောဆိုမှုပြုလုပ်ပြီး ဖိုမကိစ္စမကြာမကြာ ရှိသူတွေဟာ စိတ်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု ပိုရကြောင်း ရေရှည် အချစ်ရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျယ်တဝင့် လေ့လာချက်တစ်ခုက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ The Journal of Sex Research မှာ အခုလ နောင်းပိုင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြမယ့် လေ့လာမှုမှာ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသူနဲ့ ချစ်သူစုံတွဲ ၄၀,၀၀၀ နီးပါးကို ဖိုမကိစ္စဆိုင်ရာ စိတ်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုကို တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် ၂၀၀၆ မှာ စစ်တမ်းကောက်ယူ ခဲ့ပါတယ်။ လက်တွဲတဲ့ ပထမ ၆ လအတွင်း ဖိုမကိစ္စ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု အတိုင်းအတာ ၁ ကနေ ၇ အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တမ်းမေးခွန်း ဖြေကြားသူ ၈၃% က ပထမ ၆ လအတွင်း လိင်ဆက်ဆံမှုအပိုင်းမှာ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း […]
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အချက်
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ မှားယွင်းစွာ လုပ်မိတတ်တဲ့ အချက်များစွာ ရှိပါတယ်။ သာဓကအနေနဲ့ ဆပ်ပြာခဲ အသုံးမပြုသင့်တာ သို့မဟုတ် ကြမ်းထော်တဲ့ ပုဝါတွေ အရမ်း မသုံးသင့်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လို့ အဲဒီအရာတွေ အားလုံးထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ မျက်နှာသစ်ဖို့ သုံးတဲ့ ရေရဲ့ အပူချိန်ဟာ မိမိအသားရေ ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ရာမှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ရေ ပူလွန်းပါက အရေပြား ထိခိုက်စေခြင်းနဲ့ အပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေပြားပေါ် အနီကွက်ထခြင်း အန္တရာယ်တွေ ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းအေးလွန်းပြန်ရင်လည်း မျက်နှာပေါ်က ဆံခြည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေ ပြတ်တောက်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေနွေး သို့မဟုတ် ရေအေး အသုံးပြုခြင်းက မျက်နှာခြောက်သွေ့မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ နွေးရုံလေးသာရှိတဲ့ ရေကို အသုံးပြုတာ အကောင်းဆုံး […]
ချစ်သက်တမ်းရှည်ဖို့ လက်မခံလို့မဖြစ်တဲ့ အချက် ၂၀
အချစ်နဲ့ အရာရာအကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ် တဲ့။ တကယ်တမ်းတော့ အချစ်တစ်ခုတည်းက ပျော်ရွှင်နားလည်မှုရှိတဲ့ ချစ်သက်တမ်းတစ်ခုကို ထူထောင်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ချစ်သူဘ၀ဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ရှင်ဘ၀ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ နှစ်ယောက်ပေါင်းဘ၀တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ လက်မခံလို့မဖြစ်တဲ့ အချက်ပေါင်း ၂၀ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ၁. ကိုယ်ပြောင်းလဲလို့မရတာတွေကို လက်ခံပါ။၂. ကိုယ့်ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ကို ပြုပြင်လို့မရဘူးဆိုတာ လက်ခံပါ။၃. ကိုယ့်ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ စင်းလုံးချောပြည့်စုံမနေကြောင်း လက်ခံပါ။၄. လူတိုင်း ကိုယ့်လို ပြုမူဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ လက်ခံပါ။၅. ကိုယ့်လို မဆက်ဆံတာနဲ့ သူမမှားကြောင်း လက်ခံပါ။၆. သူ့ချို့ယွင်းချက်တွေကို လက်ခံပါ။၇. သူက သူတတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ကိုချစ်ကြောင်း လက်ခံပါ။၈. ကိုယ်က သူ့ကိုချစ်တာကို လက်ခံပါ။၉. ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ အချစ်အပါအ၀င် အရာရာအပေါ် အမြင်မတူနိုင်ဘူးဆိုတာ လက်ခံပါ။၁၀. တခါတလေ သူ့မှာ စိတ်ပျက်စရာရှိကြောင်း […]
သင်အရင်ထက် ၀ိတ်တက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုအချက်တွေကို သတိထားပြီး ရှောင်ကြဉ်ပြုမူသင့်သလဲဆိုတာ အရေးပါလာပါပြီ။ ထပ်ပြီး ၀ိတ်မတက်ဖို့ ထိန်းထားရမယ့်အပိုင်းကလည်း အရေးကြီးတာမို့ လုပ်နေကျအပြုအမူတွေထဲက တစ်ချို့ကို သတိထားပြီး မပြုလုပ်မိအောင် ရှောင်ပါ။ ၁။နေ့လည်စာ၊ မနက်စာ မစားဘဲ နေတာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ မနက်စာ မစားပဲနေလိုက်တာ၊ နေ့လည်စာ မစားပဲ ကျော်လိုက်တာမျိုးတွေဟာ သင့်ကို ရေရှည်အတွက် အဆင်ပြေစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ရက်နှစ်အတွက် ၀ိတ်ကျသွားရင်တောင် ခဏပါပဲ။ ဒါ့အပြင် သင်သတိထားရမယ့်အရာက ဆက်တိုက်စားနေတာမျိုးကိုလည်း မလုပ်ဖြစ်အောင် ရှောင်ပါ။ တစ်ခါစားပြီဆိုရင် ဘာစားသင့်သလဲ၊ ငါ ဒါကိုစားလိုက်ရင် နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက်ဆို တစ်ခုခုထပ်စားချင်မှာလား ဆိုတာ တွေးပါ။ ၂။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ မှန်ရှေ့ ခဏခဏရပ်ကြည့်ပြီး ငါဖက်တီးကြီးဖြစ်နေပြီ၊ ငါအရမ်းဝနေပြီ ဆိုတဲ့ ဆိုက်ကိုတွေ မ၀င်ပါစေနဲ့။ […]
အသားညိုတဲ့ သူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရေပြား မှိုတက်သလိုဖြစ်ခြင်းကို ဖြေရှင်းနည်းများ
အရေပြားမှိုတက်သလို အဖြူရောင်အမှုန်များက အသားရောင် မရွေးဘဲ လူတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ ညိုတဲ့သူတွေမှာဆိုတော့ သိသာနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းက အရေပြားမှာ ရေဓာတ်လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ ခြောက်သွေ့တဲ့ လေကြောင့် အရေပြားပေါ်က အစိုဓာတ်လျော့နည်းပြီး အသားအရည် ပိုမို ခြောက်သွေ့လာတဲ့အတွက် မှိုတက်သလို အဖြူမှုန်သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အရေပြားမှိုတက်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေတွေဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁)လိုးရှင်းအစား အဆီပါတဲ့ ခရင်မ်တစ်ခုကို လိမ်းပါ။လိုးရှင်းမှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ခရင်မ်ထဲမှာ ပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထက် ပျော့တဲ့အတွက် လိုးရှင်းလိမ်းထားခဲ့ရင် ခဏပဲ အစိုဓာတ်ထိန်းပေးနိုင်ပြီး မကြာခဏ ပြန်လိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ၂)ရေနွေးနဲ့ရေချိုးခြင်း၊ ဆပ်ပြာတုံးဖြင့် တိုက်ခြင်း ကိုရှောင်ပါ။ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးတာက အကြောအခြင်တွေပြေလျော့စေတဲ့အတွက် လန်းဆန်းစေနိုင်ပေမဲ့ အရေပြားကထွက်တဲ့ သဘာဝ အဆီကို ကုန်ခမ်းစေတဲ့အတွက် အရေပြားခြောက်သွေ့မှု ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၃)အရေပြားကို […]
အခုနောက်ဆုံးပေါ် အောင်သွယ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းက လူတစ်ယောက်စီမှာရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အနံ့ကိုအခြေခံပြီး ကြင်ဖော်ရှာပေးလျက်ရှိပါတယ်တဲ့။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်နံ့စစ်စစ်ကို ရရှိဖို့ တီရှပ်တစ်ထည်ကို သုံးရက်ဆက်တိုက် ဝတ်ထားရပါမယ်။ ချိုင်းလိမ်းဆီလို အမွေးနံ့သာ တစ်ခုခုလုံးဝ မသုံးထားရပါဘူး။ ပြီးရင် အဲ့ဒီအင်္ကျီ ကို အောင်သွယ်ကုမ္ပဏီကို ပို့ပေးရပါတယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း အင်္ကျီတစ်ထည်ပြန်ပို့ပေးပြီး ကိုယ့်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အနံ့ဟုတ်မဟုတ် ရှူကြည့်ပြီး အကြောင်းပြန်ရပါတယ်။ တစ်ဖက်လူကလည်း ကိုယ့်အနံ့ကို သဘောကျတယ်လို့ အကြောင်းပြန်ရင် ကုမ္ပဏီက ဒီလူနှစ်ယောက်ကို တွဲပေးပါတယ်။ ဒီလို ၀န်ဆောင်မှုပေးတာက ထူးဆန်းပြီးအူကြောင်ကြောင်နိုင်သလိုဖြစ်နေပေမဲ့ သိပ္ပံနည်းကျပြုလုပ်ထားတဲ့ သုတေသနတစ်ခုကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေရဲ့ ကိုယ်နံ့တစ်ချို့အပေါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြုတတ်သလိုချွေးထဲမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ် လက်ခံလိုတဲ့ အမှတ်အသားပြပေးနိုင်တဲ့ phremones […]
ချစ်သူဘ၀ နှင့် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ ကွာခြားမှု
ချစ်သူဘ၀။ ။ အလကားနေရင်း …အကြည့်ချင်းဆုံ၏အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ အကြည့်ချင်းဆုံလျှင်လည်း အလကားဖြစ်၏ ချစ်သူဘ၀။ ။ အလကားနေရင်း ချစ်သူကို တမ်းတ၏ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ချစ်သူကိုတမ်းတသော်လည်း အလကားဖြစ်၏ချစ်သူဘ၀။ ။ ကလေး ဘယ်နှယောက်ယူလိုက်မည်ဟုစိတ်ကူး၏အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကလေးမယူဖြစ်ခဲ့ရင်အကောင်းသားဟု တွေး၏ချစ်သူဘ၀။ ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ သူ့အားပေးလို၏ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ ဘဏ်တွင်တိတ်တိတ်လေးထားလို၏ချစ်သူဘ၀။ ။ မွှန်နေသော်လည်း ကိစ္စမရှိအိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကိစ္စရှိမှ မွှန်၏ ချစ်သူဘ၀။ ။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဖုန်းပြောလျှင် တိုးတိုးလေးပြော၏ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ဖုန်းထဲမှအော်လိုက်ရသည်ကိုပင်အားမရချစ်သူဘ၀။ ။ သူ့မွေးနေ့ကို အလွတ်ရ၏ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀။ ။ ကိုယ့်မွေးနေ့ကိုပင် အလွတ်မရ ချစ်သူဘ၀။ ။ […]
ဆံပင်အမြန်ဆုံး ရှည်လာစေမယ့် နည်းလမ်း (၇) ခု
ဆံပင်ကို သဘာဝအတိုင်းမြန်မြန်ရှည်လာစေဖို့ အချက် (၇) ချက်ကို လိုက်နာဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေအကြား စကားများ ရန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဆံပင်ပုံစံကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ကမိန်းကလေးတွေကို ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှိစေချင်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ ဆံပင်တိုတိုနဲ့သာ ရှိစေချင်ပါတယ်။ ရှည်နေတုန်းမှာ ချက်ချင်းညှပ်လိုက်လို့ရပေမယ့် တိုနေတုန်းမှာတော့ ဆံပင်တွေကို ချက်ခြင်းရှည်လာအောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မြန်ဆံပင်ရှည်လာအောင်တော့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဆံပင်မြန်မြန်ရှည်လာစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၇ ခုရှိပါတယ်။ ၁။ ခေါင်းလျှော်ရည် ကောင်းကောင်းသုံးပါ။ ၂။ မကြာမကြာ ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။ ၃။ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါတိုင်း ရေအေးသာသုံးပါ။ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေပြီး အရှည်မြန်စေပါတယ်။ ၄။ ခေါင်းသေသေချာချာ ဖြီးပါ။ ဆံပင်ရှင်းပါ။ ၅။ ဆံပင်အနားစတွေကို ညီညီလေး ညှပ်ပေးထားပါ။ အဖျားမကောင်းတဲ့ ဆံပင်တွေကရှိရင် အရှည်နှေးကွေးစေပါတယ်။ […]
အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် မှန်ရှေ့ အချိန်ဖြုန်းချိန် ပိုများ
အမျိုးသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့် အိမ်ကမထွက်ခင် မှန်ရှေ့မှာ နာရီပေါင်းများစွာ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိကြတယ်လို့ ဆိုတတ်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်အရ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုလို့တောင် မှန်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်တဲ့။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသားအယောက် ၁၀၀၀ကို ဗြိတိန်မှာ စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်လိုက်တော့ အမျိုးသားတွေဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့ကို ၂၃ကြိမ် မှန်ကြည့်တတ်ကြပြီး အမျိုးသမီးတွေကတော့ ၁၆ကြိမ်လောက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မှန်ရှေ့မှာ သုံးသပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ မှန်ရှေ့မှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ဘာမှ အထူးတလည် မဟုတ်ပဲ မျက်ခုံးလေးပင့်လိုက်၊ ဆံပင်လေးသပ်လိုက် ဟိုတွေး ဒီတွေးလုပ်နေကြချိန် အမျိုးသားတွေကတော့ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို သူတို့ပြန်ကြည့်ပြီး အတွေးနယ်ချဲ့လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာ သူတို့အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေက ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ အမြဲစဉ်းစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ၇၆ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့လက်မောင်းကို မှန်ရှေ့ကြည့်လေ့ရှိပြီး၊ ခြေထောက်ကို […]
လမ်းခွဲပြီးသား ချစ်သူကို သင်အမြဲသတိရ လွမ်းဆွတ်မိနေတာဟာ ဒီအချက် (၅) ချက်ကြောင့်သာ
ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲပြီးသွားပေမယ့် သူ့ကိုပဲ လွမ်းဆွတ်တမ်းတနေမိပါသလား၊ သူဟာ သင့်နှလုံးသားရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖဲ့ခြွေယူဆောင်သွားသလို သင်ခံစားနေရပါသလား၊ သူကိုယ့်ဘေးမှာ မရှိတော့တဲ့ လျစ်ဟာမှုကြောင့် သင်နာကျင်နေရတာဟာ ခုပြောပြပေးမယ့် အဓိက အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်ကြောင့်ပါပဲ။ ၁။သင်သူ့ကို ပုံအပ်ပြီး တွယ်တာမိလိုက်လို့ပါ။ တစ်ခြားသူတွေလို မဟုတ်ပဲ အရမ်းယုံကြည်ပြီး ချစ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် လမ်းခွဲတဲ့အခါ အရမ်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ၂။သူဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အမြဲပါဝင်နေခဲ့တာကြောင့်ပါ။ မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီး နှစ်ယောက် message လေးတွေပို့၊ နှစ်ယောက်သား မနက်စာ အတူစားဖြစ်တာ၊ အလုပ်အတူသွားတာမျိုး၊ ချစ်သူက အလုပ်လာကြိုတာမျိုး၊ စနေ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်တွေ အတူကုန်ဆုံးတတ်တယ် ဆိုရင်တော့ အခြားသူတွေထက် ပိုပြီး သူ့ကို မေ့ဖျောက်ဖို့ ခက်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ၃။သူနဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ ရှိတယ်လို့ […]